कसरी ल्याइँदैछ नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप ? « Pahilo News
कसरी ल्याइँदैछ नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप ?
प्रकाशित मिति :4December, 2020 8:04 am
काठमाडौं, १९ मंसिर । सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन तयारी थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंखया मन्त्रालयले कोरोना विरुद्ध खोप ल्याउन द्रुत प्रतिकार्य योजना बनाएको हो ।
द्रुतकार्य योजनाको लागि आठ वटा समिति गठन गरिएको छ । सरकारले खोप अभियान नै सञ्चालन गर्नेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर कुमार अधिकारीका अनुसार समितिले खोप आयात, भण्डारणदेखि वितरणलगायतका प्रक्रियाका कामलाई अघि बढाएको छ ।
उनले भने, ‘खोप व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? जनचेतनादेखि तालिमलगायतका काम भइरहेका छन् । हामीसँग भण्डारण गर्न मिल्ने खोप प्राथमिकतामा पर्छ । हाम्रो जोड जतिसक्यो अनुदानमा खोप ल्याउने हो । त्यसका लागि कूटनीतिक प्रयास भइरहेको छ ।’
खोप आयातमा सहजताका लागि औषधि अध्यादेश समेत जारी भइरहेको छ । नेपालले कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशतलाई खोप दिने योजना बनाएको छ । जसमा कोभ्याक्स फ्यासिलिटीमार्फत २० प्रतिशतलाई प्राथमिकताका आधारमा निशुल्क खोप लगाइनेछ ।
विश्वका गरीब राष्ट्रलाई खोपको समान पहुँच हुनुपर्छ भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, विश्व बैंक र गाभी सम्मिलित गठबन्धन बनेकाले यसलाई कोभ्याक्स नामाकरण गरिएको हो । खोप खरिद प्रक्रियाका लागि बजेटको जोहो गर्ने काम भइरहेको छ ।
विश्वका विभिन्न देशमा एक सयभन्दा बढी खोपबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । तीमध्ये एघार वटा खोपबारे तेस्रो चरण (थर्ड फेज) मा अनुसन्धान भइरहेको छ भने उत्पादक कम्पनीले तीन वटा खोप प्रभावकारिता ९० चन्दा माथि रहेको दावी गरेका छन् । राजधानी दैनिकबाट
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक आज पेरिसडाँडामा बस्दै
काठमााडौं, ११ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आज (आइतबार) स्थायी कमिटी बैठक बस्दै छ